Waa maxay internetka waxyaabaha? Maxay uga dhigan tahay Suuqgeynta? | Martech Zone
Isku xirnaanta internetka ayaa run u noqonaysa qalab kasta. Tani waxay door weyn ka ciyaari doontaa xogta weyn iyo suuqgeynta mustaqbalka dhow. Gartner wuxuu saadaaliyay taas sanadka 2020 waxaa jiri doona in ka badan 26 bilyan oo qalab oo ku xiran internetka. ] = [op0-9y6q1
Waa maxay internetka waxyaabaha
Waxyaabaha waxaa loola jeedaa waxyaabaha aanan caadi ahaan u maleynaynin inay isku xiran yihiin. Waxyaabaha waxay noqon karaan guryo, qalab, qalab, gawaari, ama xitaa dad. Dadku waxay ku xirnaan doonaan dadka, dadku waxay ku xirnaan doonaan waxyaabo, waxyaabo ayaa ku xirmi doona dadka, wax walbana waxay ku xirnaan doonaan waxyaabo horay u socda.
Qeexitaanka Wikipedia waa:
Internetka Waxyaabaha (IoT) waa shabakad shey ama waxyaabo "shey" ah oo kuxiran elektaroonig, softiweer, dareemayaal iyo isku xirnaansho si ay ugu suurtagasho inay ku gaarto qiimo iyo adeeg ballaaran adoo xog is dhaafsi ku sameeynaya soo saaraha, wadaha iyo / ama aaladaha kale ee ku xiran. Wax walba waa si gaar ah loo aqoonsan karaa iyada oo loo marayo nidaamka xisaabinta gundhig laakiin wuxuu awood u leeyahay inuu dhexgalo kaabayaasha internetka ee hadda jira.
Erayga Internet of Waxyaabaha waxaa qalinka ku duugay Kevin Ashton, hormoodka tikniyoolajiyadda Ingiriiska sanadkii 1999.
Internetka waxyaabaha (IoT) ayaa door weyn ka ciyaari doona sida aan ganacsiga u sameyno iyo macluumaadka isku dhafka ah ee adduun isku xirnaan badan. Laakiin ma waxaan leenahay kaabayaal sax ah oo aan ugu oggolaan karno IoT inay gaarto awooddeeda buuxda? Miyaynu si buuxda ugu talo galnay inaan baarno faa'iidooyinkeeda ballaadhan ee suuq-geynta dijitaalka ah? Dhex mar sheydan soo jiidashada leh si aad waxbadan uga ogaato. Xigasho: Meel ²
Waxaa dhajiyay dadyowga MindFrame, fiidiyowgaan waa muuqaal muuqda oo ku saabsan mustaqbalka internetka ee IBM Meeraha Xariifsan, aaladaha adeegsada internetka, iyo fikradaha ku saabsan mustaqbalkeenna meerahan oo ay ku jiraan badda xogta aan ururinayno. In kasta oo aan si deg deg ah uga korayno 1 bilyan oo isticmaaleyaasha internetka illaa 2 bilyan, tirada aaladaha ayaa ku koraya xitaa xawli dheereeya Gurigeyga waxaan ku heystaa 2 qof, laakiin ugu yaraan tobaneeyo qalab!
Sidee saameyn ugu yeelan doonaan suuqleyda? Xog kasta oo xog ah oo laga soo qaado taada wax ayaa kaa caawin kara inaad si fiican u fahamto macaamiishaada si aad u ogaato fariinta loo riixayo macmiilkeeda waqtiga saxda ah. Bartilmaameedka 'Hyper-beegsiga' (xitaa iyada oo loo marayo wax) waxay ka caawin doontaa suuqleyda inay si aad wax ku ool ah u maareeyaan wada xiriirka iyaga oo aad ugu yar baahida loo qabo istiraatiijiyad suuq geyn ballaaran.
Tags: 2020meere caqli badangartnerinternet ee waxiotkevin ashtonmaskaxda
Waa maxay sababta Wicitaanada Soo-galku muhiim ugu yihiin Safarka Macaamiishaada